Go Partner Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
Salama mpamily, eto izahay miaraka amina fampiharana mahatalanjona ho anao izay fantatra amin'ny anarana hoe Go Partner Apk. Izy io no fampiharana tsara indrindra, izay manolo-tanana ny mpamily rehetra amin'ny alàlan'ny fanomezana azy ireo mpanjifa haingana, toerana, ary maro hafa.
Araka ny fantatrao ankehitriny, mahazatra ny mampiasa karazana teknolojia hafa hampivelarana orinasa. Io no fomba tsara indrindra hampivelarana izay fikambanana, ka nitondra ity app ity izahay, izay ahafahan'ny mpamily mampiakatra haingana ny vola miditra.
Misy endri-javatra samihafa, izay azonao ampiasaina sy hahazoana vokatra mahasoa. Raha hampiasa an'ity app ity ianao dia manoro hevitra anao izahay hahafantatra momba izany. Noho izany dia mila mijanona kely eto aminay ianao fa hozarainay daholo izany. Raha manana olana amin'ny fampiasana ity app ity ianao dia afaka mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Topimaso momba ny Go Partner Apk
Izy io dia rindranasa Android, izay novolavolain'ny CAR: GO Technologies. Manolotra sehatra tsara indrindra izy io, ahafahanao misoratra anarana amin'ny taxi-be, taxi-nao, na fiara fitaterana hafa. Hahazo mpanjifa haingana ianao arakaraka ny serivisinao any amin'io faritra io.
Izy io dia manolotra anao hifandray amin'ny olona samihafa manodidina ny toerana misy anao, izay mitady rafitra fitaterana haingana. Hampandrenesina raha misy olona manodidina anao ary handefa anao ny toerana ao amin'ny rafitra GPS. Mila mandeha any amin'ny toerana misy ny mpanjifa fotsiny ianao.
Manolotra ny rafitra GPS tsara sy mazava izy io, ahafahanao mahita fomba mora ahatongavana any amin'izay alehanao. Izy io koa dia manolotra rafitra bonus isan-karazany ahafahanao mahazo loka amin'ny fahombiazanao sy ny fitondran-tenanao tsara. Manisa ny fihetsiky ny mpanjifanao amin'ny serivisinao koa izy io ary mampitombo ny laharanao.
Raha mpamily manana laharana tsara ianao dia hahazo fitokisan'ny mpanjifa bebe kokoa. Hanitatra ny serivisinao amin'ny rehetra izany. Ny dikan-teny ankehitriny an'ity fampiharana ity dia tsy manohana afa-tsy firenena sasany, dia i Indonezia, Taiwan, Singapore ary Thailand. Ny mpamily avy amin'ireo firenena ireo ihany no afaka mampiasa ity fampiharana ity.
Ny kinova ho avy, dia hanohana firenena maro hafa ary hanamora ny olon-kafa koa. Raha te hisoratra anarana ny tenanao ianao dia mila apetraka fotsiny ity rindranasa ity ary soraty ny kaontinao. Aorian'izany dia afaka mampiasa azy ianao.
Noho izany, alaivo fotsiny ity fampiharana ity ary manomboka mampiasa azy. Raha mbola manana olana amin'ny fampiasana ity fampiharana ity ianao dia afaka mifandray aminay.
anarana Mandehana Partner
Anaran'ny fonosana com.gojek.partner
Developer PT. Fampiharana Karya Anak Bangsa
Endri-javatra lehibe an'ny GoPartner Apk
Misy endri-javatra marobe amin'ity fampiharana ity. Ny sasany amin'izy ireo dia voatonona ao amin'ny fizarana etsy ambony, saingy misy zavatra maro azo zaraina. Ka izahay dia hizara lisitra tsotra misy fiasa lehibe aminareo rehetra ao amin'ny lisitra etsy ambany.
Manamora ny karazana mpamily
Mampiseho ny toerana misy ny mpanjifa
Ahoana ny fampidinana ny Apk Partner Go?
Raha te-hisintona an'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store na misintona azy amin'ity pejy ity. Raha te hampidina azy avy eto ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny. Hita eo amin'ny farany ambony sy ambany amin'ity pejy ity izy io. Mila mikitika azy fotsiny ianao ary miandry segondra vitsy, hanomboka tsy ho ela ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova fanovana ianao alohan'ny fizotry ny fametrahana. Mba hanaovana izany, mandehana fotsiny amin'ny Settings sy Open Security Panel, avy eo Checkmark 'Source tsy fantatra'. Aorian'ity fizotrany ity dia afaka mametraka azy eo amin'ny fitaovanao ianao.
Go Partner Apk no fampiharana tsara indrindra hahitan'ny mpamily fiarakaretsaka olona hafa mila diainganina. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka mampiasa azy. Aza adino ny manatona an'io indray Website.
Sokajy Apps, Travel & an-toerana Tags Mandehana Partner, Alefa mpiara-miasa Apk, GoPartner Apk Post Fikarohana